I-T2 ENTSHA 40M² IHLWULWE 3 * I-WIFIGRATUIT ISITHILI SE-THERME
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguDavid
40m2 indlu. Indawo ye-spa ezolile, iimbono zeentaba
3 Star ukuhlelwa ngokusemthethweni. (11/2018 kubantu aba-4)
Irenti ilinganiselwe kubantu abadala aba-4 okanye abantu abadala aba-2 kunye nabantwana aba-2.
Umgangatho wokuqala, i-elevator, i-wifi, ihlaziyiwe ngaphakathi nangaphandle kunye ZONKE izixhobo, ikhitshi, ibhedi, izixhobo zendlu.
Indawo yokuphumla kunye negalufa encinci yasimahla kubaqeshi bethu ngexesha lasehlotyeni.
ilinen yendlu ingabandakanywa, kunokwenzeka ukuyirenta.
Ipaki yabantwana kumgama weemitha ezingama-50.
Ifakwe kwi-250 m ukusuka kwiibhafu ezishushu zaseLuzéa kunye neBhulorho yaseNapoleon, eneembono zentaba, kwindawo ezolileyo.
Ifulethi ikwindawo yokuhlala epaki, ihotele yangaphambili eyakhiwa ngeminyaka ye-1830-40 ngezi bhalkhoni kunye nentsimbi yexesha.
Indawo yokupaka yasimahla kwi-10 yeemitha kude.
Ifakwe kwi-21 km ukusuka e-Argeles Gazost, Cauterets 24 km Gavarnie 17 km, Lourdes 30 imizuzu.
Iishuttles zasimahla ukuya kumbindi weLuz kunye nokutyibilika kweLuz Ardiden kwaye kufutshane neBarèges grand Tourmalet kunye neGavarnie ski iindawo.
Embindini wePaki yeSizwe yasePyrenees kunye neziza ezinkulu ezifana ne-Troumouse cirque, i-Estaubés cirque kunye ne-Gavarnie cirque. i-Roland Breccia, i-Pont d'Espagne, i-Gaube kunye ne-Vignemale amachibi, intlambo ye-fruitière ukufikelela kwi-Estom lake .....
Umkhweli Anibashiyanga kuphuma kokwenyuka ukuya Gavarnie (i-Kol des tentes) kunye yiLuzi Ardiden (HC) (kwisiza). Edume Col du Tourmalet (HC) 1.5 km, kwi 20 km Hautacam (HC) kunye Soulor kunye I-Aubisque pass ... (Inokwenzeka yokugcina iibhayisikili ezi-2 kwigumbi le-ski).
Isibhengezo esibonakalayo kwikona ekunene, iitshekhi zeeholide zamkelwe.
Indawo yokupaka yasimahla emazantsi eNdawo yokuhlala.
I-2.20 x 2.50 ikhabhathi yokutyibilika elungiselelwe ukugcinwa kunye nendawo yokuxhoma.
Vacuum ironing ibhodi kunye nentsimbi
IKONA YASEKHITSHINI: Ikhithi yococeko yokuqalisa yasimahla.
Itafile e-1 kunye nezitulo ezi-4 + nesitulo somntwana
1 Isikhenkcisi esikhulu esinecandelo lesikhenkcisi (30L).
Ukupheka i-1 hob ye-ceramic, i-oven ye-microwave eyi-1 I-oven ejikelezayo ejikelezayo 1 i-extractor hood.
1 Umatshini wokuhlamba izitya ezili-10 useto lweendawo.
1 umenzi wekofu wesintu + iSenseo, iKetile e-1, itoasta e-1 iseti e-1 yeraclette.
EGUMBINI LOKUHLALA :
Ibhedi yesofa enezihlalo ezi-4 eziguqulwayo 160x190.
Itafile yekofu kunye neyunithi yeTV i-96 cm yesikrini esicaba kunye ne-Xbox 360 isilawuli.
Ibhedi eyi-1 140x190, + ibhedi yePara Rain, i-3 yokugcina isifuba sedrowa kunye neetafile ezi-2 ezisecaleni kwebhedi.
Irediyo yewotshi yealam enescreen esicaba 80 Cm esinolawulo olukude.
Isitya sokuhlambela esi-1 esinogcino olu-2
Ishawa yeejethi ezimbini
Umatshini wokuhlamba 6kg
IKONA YETOILET eyahlukileyo.
Isixhobo sokomisa i-6kg
Ukucoca kufuneka kwenziwe, okanye kuhlawuliswe ngokuthe ngqo yinkonzo ye-concierge (bona kunye nabo xa unikezela izitshixo).
Ixabiso curists ukususela ngo-Epreli ukuya ekupheleni kuka-Oktobha ukusuka 213 / ngeveki, qhagamshelana nge le bon coin. Ifulethi elingatshaywayo kunye nabahlobo bethu bezilwanyana abamkelekanga
Indawo ezolileyo yeebhafu ezishushu zaseLuzéa kwi-250 M kunye nebhulorho yaseNapoleon (1860) apho unokutsiba khona i-bungee (umtsalane wokwenyani).
Luzéa: esebenza ukususela ngenkulungwane ye-16, zithandwa kakhulu luluntu eliphezulu kwinkulungwane ye-19 ukuze lihlale of ekuphiliseni (neTshawekazi laseYork bashiya Angoulême kunye Berry, uKumkanikazi Eugenie, izinhanha IsiNgesi), maqula wobushushu ka Saint-Sauveur Kusekho Kucetyiswa namhlanje hui for yamanina. izifo, i-phlebology kunye ne-ENT ngenxa yamanzi abo ashushu kwiqondo lokushisa lendalo le-33 ° elityebileyo kwiigesi ezinqabileyo, iityuwa zamaminerali kunye nesulfure. Bahlaziywa ngokupheleleyo ngo-1995 kwaye babonelelwa ngendawo yokomelela evulwa ehlotyeni nasebusika. Ngo-2004, yanda nge-balcony spa phezu komlambo waseGavarnie kunye ne-hammam yamatye.
Iibhafu ezishushu zidweliswe njengezikhumbuzo zembali ukususela ngo-Okthobha we-9, 1975
ibhulorho yaseNapoleon lll: UNapoleon III wathandana nePyrenees kwaye wenza izihlandlo ezininzi zokunyanga ekunye no-Empress Eugenie. Umsebenzi wakhe omkhulu e-Saint-Sauveur uya kuba yi-concretization yombono othandekayo kuye: ukudibanisa, ngenxa yebhulorho, iibhanki ezimbini zeGave de Gavarnie. Okokuqala "iMelika", emva koko "ucingo", ekugqibeleni sigqiba kwibhuloho yamatye ene-arch enye. Iqalile nangoko, phantsi kwesikhokelo uMnu Bruniquel, injineli ka ponts et Chaussées, lo msebenzi uya kuthabatha iminyaka emibini kwaye ziya kugqitywa ngoJuni 1861. Le kumgangatho kwebhulorho laliziimitha-68 ubude, kwaye ibekwe 63 m ngaphezu Wanikela. I-arch eyixhasayo yi-42 m ububanzi. Ivault iphumle ngokuthe ngqo kumatye acwengileyo asemdeni onikelweyo. Ukuphakama kwinqanaba lamanzi ekuqaleni kwendawo yokugcina i-vault yi-40 m; yi-63 m kwilitye elingundoqo kunye ne-65 m kwinqanaba lebhulorho.
Ukugcina inkumbulo yokuhlala kuka-Emperor kunye neenzuzo zayo, iKomishoni ye-Barèges Valley Trade Union yamisa intsika ye-12 m ukuphakama, ebekwe phezu kokhozi olukhulu, ekupheleni kwebhulorho. Ikholomu, eyenziwe ngamakhonkco ali-14, yenziwe ngelitye laseLourdes. Ukhozi lwenziwa kwimisebenzi yebhastile yaseBagnères. Ubude bubonke, kubandakanywa nokhozi, li-14 m. Ikholamu inombhalo othi: "Kwii-Imperial Majesties uNapoleon III kunye noMpress Eugenie, abahlali baseLUZ St SAUVEUR banombulelo".
Ibhuloho iya kunikezelwa kwi-traffic ngo-1861 kwaye uNapoleon III uya kubuya ukuze acinge ngayo ngoSeptemba 1863.
Asizi kubakho ekufikeni kwakho, kodwa umntu uya kukunika izitshixo ngokwexesha lakho lokufika phakathi kwentsimbi yesi-3:00 nangentsimbi yesi-7:00 ebusuku e-4 avenue Saint Sauveur, eMlle Flor store.
umnxeba 05 62 95 10 35 okanye 06 29 44 09 73 qhagamshelana nabo kwiintsuku ezi-2 okanye ezi-3 ngaphambi kokuhlala kwakho.
emva 7:00 p.m. (+10 euro) izitshixo ziya kuthathwa ikhowudi yedijithali bypassing le venkile ngasekunene, umnyango ngamaplanga.
Asizi kubakho ekufikeni kwakho, kodwa umntu uya kukunika izitshixo ngokwexesha lakho lokufika phakathi kwentsimbi yesi-3:00 nangentsimbi yesi-7:00 ebusuku e-4 avenue Saint Sauveur,…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Luz-Saint-Sauveur